> Resource> Samsung> $ 380 Nde ma ọ bụ $ 52 Nde? Olee otú Ọtụtụ Samsung ẹsiode Apple
Akụkọ n'etiti Samsung na Apple e were afọ. Nke a November, ha na dị nnọọ arahụ site na-arụ ụka n'elu Ikike nchọpụta Kemịkalụ nnyocha na ole Samsung Electronics ẹsiode Apple maka edegharị isi atụmatụ nke iPhone na iPad. Apple na-achọ $ 380 nde, mgbe Samsung-ekwu na ọ bụ nanị ẹsiode $ 52 nde. Mgbe otu ụbọchị na ọkara nke deliberating, na Silicon Valley jurors biri Wednesday si nnọkọ-enweghị mkpebi.
Ka a okwu nke eziokwu, Apple jụrụ-arụkọ ọrụ na Samsung ma na-enye ya Ikike nchọpụta Kemịkalụ ka Samsung na-etinye na ekwentị Ndinam, ma Samsung jụrụ. Mgbe ahụ agha malitere, karịsịa mgbe Samsung etolite ibu. Abụọ na ụlọ ọrụ na-ekpochi iwu agha gburugburu ụwa maka elu na ihe karịrị $ 300 ijeri smartphone ahịa.
Mgbe ọ na-abịa na nke a, ego na Samsung ga-akwụ ụgwọ maka edegharị isi Apple Ikike nchọpụta Kemịkalụ bụ n'ezie nnọọ mkpa. Ọ pụrụ ịbụ bụkwa oké ụzọ igbochi ụfọdụ Samsung ntị na mbadamba na ahịa. Agbanyeghị, ha ga-eru a mkpebi n'ikpeazụ mgbe ha laghachiri ogige, na-ekpughe n'ihi.
Ihe banyere ikpe mere n'agbata Apple na Samsung
April 2011: Apple me a ikpe megide Samsung maka "na-ezu ohi" imewe nke iPad na iPad 2, na-achọ $ 2.5 ijeri. June 2011: Samsung me a ikpe megide Apple ka ITC. August 2011: District ikpe ke Düsseldorf agbala a mbido Nsọ, machibido ụfọdụ ụdị nke Samsung si Galaxy Tab mbadamba. September 2011: Apple osụk ịgba akwụkwọ na-district ikpe ke Tokyo na Australia, megide Samsung voilating ya Ikike nchọpụta maka iPhone na iPad. November 2011: Samsung rịọrọ na Australia nke na-ere Galaxy Tab na ịga nke ọma. March 2012: Samsung ọnọde a ikpe ke Seoul, South Korea, na-ekwu iPhone 4S na iPad 2 imebi ya Ikike nchọpụta Kemịkalụ. May 2012: Cook na Samsung si CEO izute ke San Francisco na-achọ maka idozi, ma okpu. July 2012: Ụlọikpe nke California wee ka a ikpe maka patent ịgba akwụkwọ n'etiti Apple na Samsung ngwá electronic.
Atụmatụ maka Samsung ngwaọrụ nwe
Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery), ụwa mbụ Android data mgbake software,-enye gị ohere iji naghachi ehichapụ data si ọtụtụ gam akporo ngwaọrụ, n'ụzọ pụrụ iche n'ihi Samsung igwe na mbadamba. Ị nwere ike iji ya na-agbake furu efu ozi, kọntaktị, photos, video, ọdịyo na akwụkwọ.
Atụmatụ maka Apple ngwaọrụ nwe
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows & Mac) bụ ụwa mbụ iOS data mgbake software ihe onwe onye ọrụ. Ị nwere ike iji ya iji weghachite dị iche iche data dị ka ozi kọntaktsị, ndetu, oku na-aga log, igwefoto mpịakọta, foto iyi, olu memo, na ndị ọzọ, ruo 15 iche iche nke faịlụ. Ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu maka ndị ọhụrụ iPhone na iPad.
3 Ụzọ ndabere Samsung Foto na Nọgidenụ Dị Oké Ọnụ Ahịa ebe nchekwa Ọhụrụ
2 Ụzọ Nyefee Music ka Galaxy Cheta 2
Samsung ekwentị Photo Recovery: Naghachi Lost Photos si Samsung Cell ekwentị mkpanaaka na